[11 / 02 / 2020] TÜVASAŞ dia afaka mamokatra fiara mandeha amin'ny lalamby	54 Sakarya
[11 / 02 / 2020] Channel Istanbul EIA tatitra mahomby nofoanana	34 Istanbul
[11 / 02 / 2020] Fa maninona no tokony hijanona eo amin'ny gara misy ny gara ny Haydarpaşa Station?	34 Istanbul
[11 / 02 / 2020] Fanadiovana ara-teknolojia Nano amin'ny Tram ary Bus any Kocaeli	54 Sakarya
[11 / 02 / 2020] TRNC dia mampiditra ny fiara an-trano GÜNSEL B9	90 TRNC
13 / 12 / 2019 Jobs, ANKAPOBENY
Ny Oniversite Selcuk dia hanakarama mpiantoka; Toeram-pitsaboana hopitaly ao amin'ny Oniversite Selçuk, 657 No. Lalàn'ny mpiasam-panjakana 4. (b) ao amin'ny Andininy X (b) ny Annex 06.06.1978 ny Fitsipika momba ny fampiasana ny olona manana ny fifanarahana izay navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy voatondro 7 ary voafidy amin'ny didim-pitsarana 15754 / 28.06.2007 ary daty 26566 ho an'ny asa mifanaraka amin'ny Article (B). Ny mpiasa 2 (voalohany) dia voatendry handray ireo toerana voatondro.
Ireo mpifaninana dia takiana amin'ny fampiharana ao anatin'ny 15 andro manomboka amin'ny fotoana namoahana an'io dokambarotra io amin'ny gazety. (13 / 12 / 2019- 27 / 12 / 2019) eo anelanelan'ny andro fiasana ofisialy sy ora fiasana (08: 00: 17- 00: XNUMX) miaraka amin'ireo antontan-taratasy nangatahana avy amin'ny tranokalan'ny tranonkala.hopitaly.selcuk.edu.tr web) amin'ny alàlan'ny famenoana ny taratasy fangatahana homena. (Tsy ekena ny fangatahana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra.)
Engineering Marvels Bridge Varda Bridge
Ohatra: Ali Eren Hoy izy:
Eto indray, ny iray amin'ireo torpedo dia hisokatra amin'ny lisitry ny mpiasa manokana izay notadiaviko ny mpiasa iray izay mahalala ny tsy tantin'ny mpiasan'ny hopitaly izay notantanan'ny mpiasa tao amin'ny efitrano nosokafana tamin'ny iray amin'ireo mpiasa. Yahu inona ny fahotanao tsy misalasala dadatoana ny fanadinantsika miasa ary nahazo ny isa fisarahana hisarahana ny dadatoako tsy mety amin'ireto Garibanlar halal ireto
Ny ekipan'ny bisikilety Salcano Sakarya dia niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao toy ny tadio
Channel Istanbul EIA tatitra mahomby nofoanana
Fa maninona no tokony hijanona eo amin'ny gara misy ny gara ny Haydarpaşa Station?
Ny kaominina ao Melikgazi mba hihoatra ny fiampitana amin'ny ambaratonga amin'ny Karahöyük
TURKSTAT: Nahazo ampahatelon'ny trano novidiana ny vehivavy
Nandroaka ny tompony i Ferrari
Afaka Miaraka Volvo Geely
Tiorkia voalohany Winter Rally Foko Anjarako aloha ny manao Sarikamish
Tesla Model S Hit Ny Fiaran-dàlamby fiaran-dalamby ary esory